MW Xasan Sheekh miyaa ka tanaasulay tartanka doorashada? | KEYDMEDIA ONLINE
MW Xasan Sheekh miyaa ka tanaasulay tartanka doorashada?
Warar saacadhii danbe aad u soo xoogeystay ayaa tibaaxayay in Xasan Sheekh, aqbalay dalabka beel weynta Mudullood, taas oo horeba dad u badan u arkeen mid xaqiiqda ka fog oo aan sal iyo raad toona lahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii la soo dhaafay la isla dhex marayay, oo ahaa in beelaha Mudullood, ay MW Xasan Sheekh Maxamuud, ku qancyeen inuu ka haro tartanka Madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkaan isla-markaaana uu dhiso Sheekh Shariif.
“Waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba ka jirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha mudullood oo lagu gaaray heshiis isku tanaasul ah oo la dhex dhigay murashaxiinta qaar”. Ayuu yiri MW Shariif.
Shaqsiyaadka aadka u hadal hayay warkaan, oo u badan dhallinro ku heyb ah labada masuul, kana kala tirsan labada Xisbi ee ay kala hoggaamiyaan ee UPD iy Himilo Qaran, ayaa sheegayay in laga fogaanayo sidii 2017-kii dhacday markaas oo Farmaajo labadooda ka dhex qaaday kursiga.
Doorashadii Madaxweynaha ee dhacday billowgii 2017-kii waxaa guud ahaan codeeyay 328 xildhibaan, oo isugu jira labada Aqal ee Baarlamaanka, 162 cod waxaa helay kaliya Saddex musharax oo Muddollod ku abtirsada, Xasan Sheekh Maxamuud 88 cod, Shariif Sheekh Axmed 49 cod iyo C/qaadir Cosoble Cali oo helay 25 cod, taas oo ka dhiga in ay heleen kala bar guud ahaan cododkii Xidhibannada.
Waxaa jira war kale oo sheegay in Madaxweyne Shariif, uu beesha hoose ee uu ka dhashay uu weydiistay in la siiyo oo aan lagula tartamin kursiga Xildhibaannimo, ee uu hadda ku fadhiyo, Wasiiru dowlihii hore wasaaradda maaliyadda xukuumaddii Xasan Sheekh, Ganacsade, Xil; Cabdullahi Maxamed Nuur.